No comments : at 4/30/2014 Labels: Gazi Hashim , The Holy Prophet , အတ္ထုပ္ပတ္တိ
တမန်တော် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) (Refurbished Scan Book)
Prophet Muhammed (Gazi Hashim).pdf
ရေးသားပြုစုသူ: ဃာဇီ သီရိပျံချီ အလ်ဟဂ်ျ မော်လာနာ မုဟမ္မဒ် ဟာရှင်မ်
Book Size: 4.93" x 7.27"
ခုနှစ်- ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉၆၈
မှတ်ချက်- Download လုပ်ရန် အခက်အခဲရှိလျှင် MediaFire Link ကို ဦးစားပေးပြီး Down ပါ။
မင်းနှင့်လွှတ်တော်မှ တည်ဆောက် ခွင့်ပြုခဲ့သော ပြန်တမ်းဝင် အစ္စလာမ်သာသနာ့ဝတ်ကျောင်းတော်များ ၂
No comments : at 4/30/2014 Labels: History Of Masjid and Madrasah , Masjid , မောင်မောင်ကြီး(ဦး၊ မန်း-သမိုင်းသုတေသီ)
မင်းနှင့်လွှတ်တော်မှ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့သော ပြန်တမ်းဝင် အစ္စလာမ်သာသနာ့ဝတ်ကျောင်းတော်များ ၂ (Refurbished Scan Book)
Early Mosques in Mandalay 2.pdf
ပြုစုသူ: ဦးမောင်မောင်ကြီး (မန်း-သမိုင်းသုတေသီ)
Book Size: 8.17" x 11.67"
ဖြန့်ချိသူ- Academy of Islamic Historical Research Foundation 1972
ခုနှစ် - ၁၉၇၂
http://www.mediafire.com/view/g47eeld4qzzgjm4/Early Mosques in Mandalay 2.pdf
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် ခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်၏။
No comments : at 4/30/2014 Labels: Harun Yahya , အလီတန်ဂွန်း(မုဟမ္မဒ်) , သောင်ဟီးဒ်
File Size- 4.7 MB
ဘာသာပြန်သူမှ အွန်လိုင်းတွင် အခမဲ့ဖြန့်ချီသည်။
No comments : at 4/30/2014 Labels: ဓမ္မသတ် , မူစာ(မုဟမ္မဒ်/မော်လာနာ-မဇွာဟေရီ) , အရ်ှရဖ်အလီ(ထာနဝီ)(မော်လာနာ)
ဘဟစ်ရ်ှတီဇေဝရ်ကျမ်း - ဒုတိယပိုင်း (Refurbished Scan Book)
Bahishthi zaywae - Vol 2.pdf
ပြုစုသူ: ဟကီမုလ်အွမ္မသ် ဟဇ်ရသ် မော်လာနာ အရ်ှရဖ်အလီ (ထာနဝီ)
ပြန်ဆိုသူ: မော်လာနာ မုဟမ္မဒ် မူစာ (မဇွာဟေရီ)
Book Size: 7" x 9.33"
ခုနှစ်-နိုဝင်ဘာလ ၁၉၈၄ ခုနှစ်
http://www.mediafire.com/view/rgce05a7nye1j4g/Bahishthi zaywae - Vol 2.pdf
ဘဟစ်ရ်ှတီဇေဝရ်ကျမ်း - ပထမပိုင်း (Refurbished Scan Book)
Bahishthi zaywae - Vol 1.pdf
ခုနှစ်- သြဂုတ်လ ၁၉၈၇ ခုနှစ်
http://www.mediafire.com/view/yp83o263o6cdh3n/Bahishthi zaywae - Vol 1.pdf
No comments : at 4/30/2014 Labels: DrZakir_Naik , ဝါးခယ်မမောင်မင်းနိုင်
စောဒကနှင့်အဖြေ (၁) (Refurbished Scan Book)
ပြုစုသူ: ဒေါက်တာ ဇာကိရ်နိုက် (M.B.B.S)
Book Size: 4.67" x 7.67"
ထုတ်ဝေသူ -အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာ ကောင်စီ
ကျွန်ုပ်ရဲ့ နှစ်အတန်ကြာက ဒအ်ဝဟ် အတွေ့အကြုံအရ အစ္စလာမ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် မွတ်စလင်မဟုတ်သူဘက်က စောဒကအတက်ခံရဆုံးမေးခွန်းက အခုနှစ်ဆယ်ပဲရှိတာပါ။
မွတ်စလင် မဟုတ်တဦးကို “လူကြီးမင်းဘက်က အစ္စလာမ်က မှားနေတယ်လို့ ခံယူထားတယ့်အချက်တွေက ဘာများတုံး” လို့မေးခဲ့ရင်၊ အဲဒီသူဘက်က မေးခွန်းလေးငါးခြောက်ခု မေးလာပါလိမ့်မယ်။ သူ့မေးခွန်းတွေကလဲ ဒီအမေးအခံရဆုံး နှစ်ဆယ်ရဲ့ ဘောင်ထဲက မလွတ်ပါဘူး။
အစ္စလာမ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အမေးခံရဆုံးသော မေးခွန်းနှစ်ဆယ်ကို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ယုတ္တိဗေဒနည်းကျကျ အဖြေပေးသွားလို့ရပါတယ်။
မွတ်စလင်မဟုတ်သူ အများစုကြီးက ဒီအဖြေတွေကိုကြားရရင် လုံးဝကျေနပ်အားရ ယုံကြည်သွားကြမှာ မလွဲပါဘူး။ တကယ်လို့ မွတ်စလင်တစ်ဥိးအနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေိကု အလွတ် ကျက်မှတ်ထားကြရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်မှတ်ထားကြရုံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှိနေခဲ့ရင် အင်ရှာအလ္လာဟ် မွတ်စလင်မဟုတ်သူဘက်မှ အစ္စလာမ်၏ ပကတိသစ္စာတရားကို အခိုင်အမာ မယုံကြည်သွားစေဦးတော့၊ အနည်းဆုံး အစ္စလာမ်အပေါ် အထင်မြင်လွဲမှားမှုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့်ရယ်ကြောင့် သူ့ဘက်က အောင်မြင်မှု ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
http://www.mediafire.com/view/3iv420vt3505lx5/Complain Answer - Wakhaema Mg Min Naing.pdf
No comments : at 4/30/2014 Labels: Children , LifeStyles , ယူနွတ်စ်(မုဟမ္မဒ်၊မော်လာနာ၊ကာရီ-မအူပင်)
အစ္စလာမ်သာသနာတော်အရ ကလေးအမည်ပေးနည်း (Refurbished Scan Book)
Naming Children by Islam.pdf
ပြန်ဆိုရေးသားသူ: မော်လာနာ ကာရီ မုဟမ္မဒ် ယူနွတ်စ် (မအူပင်)
Book Size: 5" x 7.2"
ခုနှစ်- မတ်လ ၁၉၉၈
No comments : at 4/29/2014 Labels: Harun Yahya , သုတစာပေ , အလီတန်ဂွန်း(မုဟမ္မဒ်)
No comments : at 4/29/2014 Labels: ကုရ်အာန်
ဤကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ်ဘာသာပြန် (e-Book) စာအုပ်တွင် မိမိလိုချင်သော စူရဟ်နံပါတ် နှင့် အာယတ်နံပါတ်ကို အလွယ်တကူ အမြန်ရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Bookmarks ထည့်သွင်းထားသဖြင့် Bookmarks ရှိ မိမိဖတ်ရှုလိုသော စူရဟ်/အာယတ်နံပါတ် ကို နှိပ်ရုံဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပေမည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာဘာသာပြန် ကို ….
‘ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏အလင်းပြကျမ်း’ ပြန်ဆိုပြုစုရေးသားသော ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်များ
၁။ သိရိပျံချီ အလ်ဟာဂ်ျ မောင်လာနာ အလ္လာမဟ် ဃာဇီ မုဟမ္မဒ်ဟာရှင်(မ်) (တာဝန်ခံဘာသာပြန်မှူး)
၂။ မောင်လာနာ ကာရီ မက္ကဆူဒ် အဟ်မဒ်ခါန်း (ခ) ဆရာကြီးဦးခင်မောင်ကြီး (တွဲဘက်ဘာသာပြန်မှူး)
ဘာသာပြန်ဌာနတွင် ဆရာကြီးဦးထွန်းကြွယ်မှာ ၁၉၅၅ ခု၊ မေလ(၁)ရက်နေ့မှ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ထိ မြန်မာအတိုင်ပင်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူထမ်းရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁။ သိရိပျံချီ ဦးဘသောင်း BSc, BL (အတွင်းဝန်ဟောင်း – လူမျိုးစု လွှတ်တော်)
၂။ အလ်ဟာဂ်ျ မောင်လာနာ မုဖ်သီ မဟ်မူးဒ် ဒါဝုဒ် ယူစုဖ်
၃။ မောင်လာနာ အိဗ်ရာဟီးမ် အဟ်မဒ် မဇွာဟေရီ
၄။ ဟာဂျီ မိရ် ဆုလိုင်မာန် MA, BL (လွှတ်တော်ရှေ့နေ)
၅။ ရှိုင်ခွလ်ဟဒီးဆ် အလ်ဟာဂ်ျ မောင်လာနာ မုဟမ္မဒ် ဘရှီရွလ္လာဟ်
၆။ ဦးဖေစိန် (ကယားပြည်နယ် – အတွင်းဝန်ကလေးဟောင်း)
တည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့တွင် ပါဠိ ပါမောက္ခ ဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ် (BA) မှာ ကော်မတီစတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၁၉၅၀-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ ကွယ်လွန်သည့် ၁၉၅၄-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ အထိ သဘာပတိအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Book Size: 5.29" x 8.22"
ပုံနှိပ်သည့် ခုနှစ်- ၁၉၉၈ ခုနှစ်
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံ မဒီနာမြို့တွင် ပုံနှိပ်သည်။
No comments : at 4/29/2014 Labels: Gazi Hashim , Hadith
ဗုခါရီိကျမ်း မြန်မာဘာသာပြန် (၃) (Refurbished Scan Book)
Al-Bukhari Vol3by Gazi Hashin.pdf
ပြန်ဆိုပြုစုသူ: ဃာဇီ သီရိပျံချီ မုဟမ္မဒ် ဟာရှင်မ်
ထုတ်ဝေသူ-ဃာဇီ သီရိပျံချီ မုဟမ္မဒ် ဟာရှင်မ်
http://www.mediafire.com/view/3909b51b1f9bzo2/Al-Bukhari Vol3by Gazi Hashin.pdf
ဗုခါရီိကျမ်း မြန်မာဘာသာပြန် (၂) (Refurbished Scan Book)
Al-Bukhari Vol2by Gazi Hashin.pdf
http://www.mediafire.com/view/p86iwz8tlbeeke5/Al-Bukhari Vol2by Gazi Hashin.pdf
ဗုခါရီိကျမ်း မြန်မာဘာသာပြန် (၁) (Refurbished Scan Book)
Al-Bukhari Vol 1 by Gazi Hashin.pdf
http://www.mediafire.com/view/s4oa38m8baa3zoq/Al-Bukhari Vol 1 by Gazi Hashin.pdf
No comments : at 4/29/2014 Labels: Gazi Hashim
ဃာဇီအသံ အတွဲ (၂) (Refurbished Scan Book)
Gazi Athan Vol 2.pdf
စီစဉ်ရေးသားသူ: ဃာဇီ သီရိပျံချီ အလ်ဟဂ်ျ မော်လာနာ မုဟမ္မဒ် ဟာရှင်မ်
Book Size: 4.81" x 6.93"
ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ခုနှစ်-ဇန်န၀ါရီလ ၁၉၈၄ ခုနှစ်
No comments : at 4/29/2014 Labels: Gazi Hashim , IRAC
ဃာဇီအသံ အတွဲ (၁) (50 years old book ) (Refurbished Scan Book)
Gazi Athan Vol 1.pdf
ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ခုနှစ်-ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၆၄ ခုနှစ်
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကလေးသူငယ်များ အတွက် ပုံပြင်ပဒေသာ (ပထမတွဲ)
No comments : at 4/28/2014 Labels: Children , Stories , နူးရ်မုဟမ္မဒ်(ခ)ဦးခင်ရွှေ(မော်လာနာ)
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကလေးသူငယ်များအတွက် ပုံပြင်ပဒေသာ (ပထမတွဲ) (Refurbished Scan Book)
Stories for Children in Islam Vol 1.pdf
ပြုစုသူ: မော်လာနာ နူးရ်မုဟမ္မဒ်-ဦးခင်ရွှေ
ခုနှစ်- ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဧပြီ
Book Size: 4.67" x 6.83"
No comments : at 4/28/2014 Labels: 1990-2000 , Arabic , Language , စံဝင်း(ဦး၊နဇွာမီ)
ဆရာလွတ်အသုံးချအာရဗီသဒ္ဒါ အတွဲ (၃) (Refurbished Scan Book)
Teach Yourself Arabic Vol 3.pdf
ပြုစုသူ: ဆရာ ဦးစံဝင်း (နဇွာမီ)
Book Size: 6.33" x 8.03"
ခုနှစ်- ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ
ဆရာလွတ်အသုံးချအာရဗီသဒ္ဒါ အတွဲ (၁+၂) (Refurbished Scan Book)
Teach Yourself Arabic Vol 1 + 2.pdf
Book Size: 6.33" x 8.17"
ခုနှစ်- ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဧပြီ
No comments : at 4/28/2014 Labels: 2010-2020 , Interfaith , UNC , ခင်မောင်ချို(ဦး)
ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး (Refurbished Scan Handout)
United National Congress (H-Q) - Multi-Racial Living with Harmony & Peace.pdf
ပြုစုသူ: ဦးခင်မောင်ချို (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)
ခုနှစ် - ၂၀၁၃ ခုနှစ်-ဧပြီ
Book Size: 5.6" x 8.33"
No comments : at 4/28/2014 Labels: 1990-2000 , Children , LifeStyles , နူးရ်မုဟမ္မဒ်(မွဖ်သီ)
အစ္စလာမ်နှင့် သားသမီးပြုစုပျိုးထောင်ရေး (Refurbished Scan Book)
Islam & How to Nurture the Children.pdf
ပြုစုသူ: မုဖ်သီ နူးရ်မုဟမ္မဒ်
Book Size: 4.67" x 7.13"
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်- ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၉၈ (ပထမအကြိမ်)
No comments : at 4/28/2014 Labels: 2000-2010 , Interfaith , အေးလွင်(ဦး၊အလ်ဟဂ်ျ)
ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးစာတမ်း (အစ္စလာမ့်ရှုထောင့်) (Refurbished Scan Book)
Inter-Faith Dialogue Symposium .pdf
ဟောကြားသူ: အလ်ဟဂ်ျ ဦးအေးလွင် (ကာဒရီယာ၊ အာလီယာ)
Book Size: 4.27" x 6.83"
No comments : at 4/28/2014 Labels: Javeed Than , အစ္စလာမ့် လူမှုသိပ္ပံစာစုများ
မွတ်စလင်မ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။ (Refurbished Scan Excerpt)
Who is Muslim.pdf
Book Size: 6.67" x 9.83"
http://www.mediafire.com/view/93vngvzjhahxusm/Who is Muslim.pdf
No comments : at 4/28/2014 Labels: MMSY , New Muslims , ဝါးခယ်မမောင်မင်းနိုင်
ကမ္ဘာနိုင်ငံ အသီးသီးမှ ကမ္ဘာအကျော်ဒေးယျများ၊ ပါမောက္ခကြီးများ၊ သုတေသီကြီးများ၊ ဓမ္မကထိကများ၊ ထိပ်တန်းကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးများ၊ သတင်းစာဆရာကြီးများ၊ တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးများ၊ ပင်တဂွန် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိကြီးများ အပါအ၀င် လူပုဂ္ဂိုလ် ၃၉ ဦးတို့၏ အစ္စလာမ့်အေးရိပ်သို့ ၀င်ရောက်လာပုံနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒသာနနှင့် ရူထောင့် အမြင်များကို စုစည်းထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာအများစုမှာ စာရေးဆရာ ၀ါးခယ်မမောင်မင်းနိုင် ဘာသာပြန်ပြုစုတဲ့ အစ္စလာမ့်အေးရိပ်ဆာယာသို့ စာအုပ်မှဖြစ်ပြီး MMSY မိသားစုဝင်များမှ ပြန်လည် စာရိုက်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Google Doc: https://drive.google.com/file/d/0B3E99lCpDfC3SW1sbXR6SE1uekE
No comments : at 4/28/2014 Labels: Gazi Hashim , ကုရ်အာန်
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း (အစောင် ၁ - အစောင် ၃၀) - New Download Links
Quran Alin Pya Kyan (Vol - 1 to Vol-30)
The Holy Quran Tafsir (Burmese Version) (Vol - 1 to Vol-30)
(Refurbished Scanned Book)
သီရိပျံချီ အလ်ဟဂ်ျ မော်လာနာ အလ္လာမဟ် ဃာဇီ မုဟမ္မဒ် ဟာရှင်မ် (တာဝန်ခံဘာသာပြန်မှူး)
မော်လာနာ ကာရီ မက္ကဆူးဒ် အဟ်မဒ်ခါးန် ဦးခင်မောင်ကြီး (တွဲဖက်ဘာသာပြန်မှူး)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း တည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့
Book Size: 14.3" x 19.3"
Note: Book Size become double bocz of technical misunderstanding. (Original Books' Size is around 7.2" x 10")
** MediaFire Link များကို ဦးစားပေးပြီး DownLoad လုပ်ပါ။
1. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (01)
2. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (02)
3. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (03)
4. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (04)
5. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (05)
6. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (06)
7. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (07)
8. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (08)
9. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (09)
10. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (10)
11. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (11)
12. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (12)
13. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (13)
14. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (14)
15. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (15)
16. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (16)
17. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (17)
18. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (18)
19. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (19)
20. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (20)
21. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (21-22))
22. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (23-24))
23. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (25)
24. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (26)
25. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (27)
26. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (28)
27. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (29)
28. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း အစောင် (30)